Vagadziri vanogashira kukokwa kwekuitisa zvikamu zvepamhepo neApple | IPhone nhau
Kuchengeta vanogadzira chinhu chakakosha kune kambani yakaita seApple uye nekambani chero ipi inoda kuve nemaapplication pamajoni avo. Mune ino kesi, Apple inokoka vanogadzira kune akateedzana ezvikamu zvepamhepo kuti vadzidze zvakawanda nezve majeti, App Vhidhiyo uye sarudzo yekugadzira zvinowirirana maapplication eApp uye Mac. Pane ino nguva, zvakaitwa nekambani iyi kutumira email kune vanogadzira ichivakoka kuti vatore chikamu.
Rudzi rwekuenderera mberi WWDC
Iko kudzidziswa kwevagadziri veApple vanofanirwa kuve neese anogona maturusi anowanikwa pamunwe wavo, pamusoro peizvozvo vanoda kugara vachidzidziswa kune skuunza akanakisa kuita kune ese matsva mabasa Ivo vane mafekitori anoshanda masystem uye Hardware, saka zano reWWDC rakakamurwa muzvikamu zvakati zvinopararira mukati megore rose rakanaka.
Mune ino kesi Apple inotarisa kumaWidgets ezvirongwa izvi zvinonzi: Kuvaka Kwakakura Widget Zviitiko. Mune iyo email inotumirwa naApple kune vanogadzira, anotsanangura kuti vachashanda pamwe neApple timu uye vagovana ruzivo kune Tora zvakanakira yako iPhone, iPad, uye Mac. Kune chiitiko ichi chichatanga muna Kukadzi 1, Apple inoratidza kuti zvese zvichaitika online.
Pasina kupokana, zvikamu zvemahara izvi zvinobatsira mapato ese Iyo yekuvandudza inodzidza sarudzo nyowani kutora mukana wemabasa uye Hardware, Apple pachayo inokwanisa kukurudzira vanogadzira zvakanyanya uye mushandisi anobatsirwa kubva kune dzese nhau nekudya mamwe mashandisirwo uye akawanda Apple zvigadzirwa. Vhiri rinonakidza remunhu wese iro rakakosha kuti rirambe riripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Vagadziri vanogamuchira kokero yekuitisa pamhepo zvikamu neApple